Warbixin Horumar ah oo ka socota
Himilada ilaa Ficilka
Wadaagista Warbixinteena Waxqabadka
Markay Hay'adda McKnight Foundation soo bandhigtay markii ugu horreysay abid dadweyne kala duwanaanta, sinaanta, iyo ka mid noqoshada (DEI) bayaanka ansixinta guddiga dabayaaqadii 2017, hal xubin guddiga ayaa si xikmad leh u muujiyay, “Kuwani waa ereyo qurxoon. Waxaan rajeynayaa inaan ku taageeri karno waxqabad. ”
Wax badan waan is afgaran waayey.
Himilada waa in loo beddelaa ficil maxaa yeelay bulshooyinkeennu waxay u qalmaan in ka badan ujeeddooyin wanaagsan.
Waan ognahay kalsoonideena inay ku tiirsan tahay "say-do" taxane, taasoo la micno ah in ficiladeena ay tahay inay la jaan qaadaan qiyamkeena aan sheegnay. Cida aan nahay iyo sida aan ugu dhaqmayno gudaha gidaarada aasaaska waa inay la jaanqaadaan isbedelka aan ka filayno kuwa kale ee ka baxsan dunida.
McKnight, runtii waxaan ku taageereynaa ereyadayada hamigeenna ah ficil. Warbixintani waxay kor u qaadeysaa tusaalooyin ka mid ah isbeddelada aan ku sameynay Hay'adda si aan ugu janjeero sinnaanta saddexda sano tan iyo markii ay guddiga ansixiyeen bayaanka DEI. Akhriso warbixinta oo dhameystiran, oo waa kuwan xoogaa muhiim ah:
Sinaan Ku Xidhnayd Howlgalkeena iyo Qiyamkeena
Waxaan dib u eegnay bayaankeenna howlgalka si aan si cad ugu baaqno mustaqbal cadaalad ah, sinnaankuna hadda waa mid ka mid ah afarta aasaasiga ee aasaasiga u ah qiyamkeena.
$32 Milyan oo loogu talagalay Gobolka Minnesota oo loo siman yahay
Iyadoo la adeegsanayo geedi socod loo dhan yahay, McKnight wuxuu qorsheeyey barnaamij gebi ahaanba cusub oo diiradda lagu saaray sidii loo dhisi lahaa Minnesota loo siman yahay oo loo wada dhan yahay. Barnaamijka Vibrant & Equitable Communities waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu waaweyn McKnight. Waxaa la saadaalinayaa inay sameyso $32 milyan ama kabadan oo deeqo ah sanadkasta laga bilaabo sanadka 2022.
Siyaasado iyo Hab-dhaqanno Cusub
Waxaan soo saarnay dhowr siyaasadood iyo dhaqanno cusub oo ku baahsan waaxyaha si loo tixgeliyo sinnaanta oo aan si qoto dheer ugu baarno sida aan u qabanno howlaha samafalka.
Laga soo bilaabo Muuqaalka gadaashiisa ilaa u Hadalka Caddaaladda
Waxaan kordhinay adeegsiga codkeena guud si aan ugu istaagno midnimada bulshadayada, si wada jir ah uga murugoono falalka rabshadaha midab takoorka, iyo u doodista dimoqraadiyada ka qeybqaadashada iyo qeybsiga lacagaha federaalka.
Hogaanka Sare ee Barnaamijka iyo Hogaanka Barnaamijka
Gudigayaga agaasimayaashu waxay doorteen Tonya Allen, oo muddo dheer ku guuleysaneysay sinaanta iyo ka mid noqoshada, inay noqoto madaxweynaha McKnight dabayaaqadii 2020. Waxay madax u tahay dadka ugu badan ee ka tirsan kooxda hoggaanka sare ee midabka ee dumarka oo dhan kana kala yimid khibrado kala duwan iyo khibrado nool. Agaasimayaasha barnaamijkeenu waxay sidoo kale la yimaadaan khibrado kala duwan oo noolaa, xiriir hoose oo bulshada ka dhexeysa, iyo ballanqaadyo adag oo ku saabsan in sinnaanta loogu daro deeq bixintooda.
Maaddaama aasaas gaar loo leeyahay, muddo dheer ayaan aqoonsannay in aan saameyn ku abuuri karno doorar badan oo ay ka mid yihiin - oo aan ku fidinno meel ka sii fog-bixin-bixin Lixdaan aqoonsi, sida loogu magacaabay bayaankayaga 'DEI', waa maalgeliye, uruuriye, hoggaamiye feker, shaqo-bixiye, hay'ad dhaqaale, iyo maal-galiye hay'adeed. Warbixintu waxay soo koobeysaa talaabooyinka ficil ee aan kusoo qaadanay lixdaas door.
Saddexdii sano ee la soo dhaafay, waxaan ku guuleysanay sida aan u beddeleyno siyaasadahayaga, dhaqaajinta lacagta, u adeegsanno codkeenna, deeqo u sameyno, kuwa kale isugu yeerno, iyo la shaqeynta kuwa wax iibiya. In kasta oo qaar ka mid ah tallaabooyinkani ay yihiin kuwo suubban oo curdin ah, xitaa kuwa ugu yar ee ficilladan ayaa abuuray horudhac iyo hannaan aan ku ballanqaadnay inaan sii wadno.
Weli waxaa noo dhiman shaqo badan oo badan iyo inaan barto. Dadaalladeenna DEI waa shaqo socota. Horukaca oo dhami wuxuu ku bilaabmaa talaabooyin yaryar.
Waxaan sii wadi doonnaa barashada, dhageysiga, milicsiga, iyo la hadalka — daahfurnaan — si loo hormariyo sinnaanta gudaha iyo dibedda aasaaska. Tan ugu muhiimsan, waan sii wadaynaa ficilka. Waxaan u aragnaa shaqadan inay tahay masuuliyadeena la wadaago — iyo fursada aan wadaagno — maxaa yeelay waxa meesha ku jira wax aan ka yarayn masiirka aan wadaagno.
Bayaankayaga DEI iyo qormooyin dheeri ah iyo ilo ayaa laga heli karaa halkan.